December 2015 - Page 2 of 44 - iftineducation.com
DHALINYARADA KU XIRAN XABSIGA DHEXE OO BARTA FARSAMOOYIN KALA DUWAN OO GACANTA AH (SAWIRRO)
aadan21 / December 31, 2015
iftineducation.com – Dhalinyarada Maxaabiista ee ku xiran Xabsiga Dhexe ee Magaalada Muqdisho ayaa xilligaan waxa ay yihiin kuwa isbedel dareemaayo, kadib markii Taliyaha ciidamada Asluubta Somaliyed uu Xabsiga Dhexe ka hirgeliyay horumaro kala duwan. Xabsiga Dhexe ayaa loo sameeyay goobo Dhalinyarada ay wax ku bartaan, hadii ay tahay dhanka Aqoonta iyo Farsamada Gacanta intaba. Dhalinyarada qaar ayaa barta sida Dawaarka loo…
DOWLADDA SOMALIYA OO DAD U QAB QABATAY HUBKII LAGA HELAY MASAAJIDKA KU YAALA MAGAALADA MUQDISHO
iftineducation.com – Ciidanka Booliska Somaliya, ayaa tiro dad ah u soo qab qabtay hub shalay laga helay Masaajid ku yaala xaafadda Sey Biyaano ee Degmada Hodan. Waxaa kaloo jira lacag cadadkeedu lagu sheegay ($3,950) oo sidoo kale hawlgalkaasi lagu soo qabtay. C/risaaq Cumar Maxamed, Wasiirka Wasaaradda Amniga Somaliya, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inay jiraan tiro dad ah oo loo soo…
Lacag darteed sidaan ma u waalan lahayd -Daawo
aadan21 / December 30, 2015
iftineducation.com – Lacag darteed sidaan ma u waalan lahayd -Daawo Nin Soomaali ah oo ku nool gobolada Puntland ahaan nin miskiin aha aya la siiyey lacag dhan 45 kun oo doler markii lagactan la gudoonsiiyey ayuu qaadan waayey in lacag intaas dhan la siiyo adaaba yaabi ee qeebta hoose ka daawo kkkkkkkk Halkan ka Daawo
Daraasad Dumarka Hamiga Baashaalka ka guuro maxaa kalifa -Akhriso daraasadan
iftineducation.com – Waa maxay hami yarida haweenka? Dareenka kacsiga ee haweenka waa mid is bad-badalo, inuu kaco ama yaraado waxay badanaa la xiriirtaa xiriirka ka dhaxeeyo iyada iyo lamaanaheeda ama isbadallada waaweyn ee ku dhaca nolosheeda sida: uurka, dhalmo-deyska iyo xanuunnada. Haddii hami yari ay dhib kugu heyso waxaa ku saacidi karo in aad badasho nolol maalmeedkaaga iyo qaabka aad adiga…
Weligaa Qof kaa wayn ha isku daadaansan -Waxa ku dhacay Daawo
iftineducation.com – Weligaa Qof kaa wayn ha isku daadaansan -Waxa ku dhacay Daawo DAAWO VIDEO QOSOL LEH: Nin aad u weyn oo meel uu ka yimid la garan waayey kadib markii ay labo isku dirireysay wadada uu…. adaa yaabi doonee bal kaga bogo qeebta hoose muuqaalkaan waalan ay kuusoo bandhigtay shabakada iftineducation.com oo dhalinta taageerto mar walbo Halkaan Ka Daawo Muuqaalka
CEEBTA ABWAANKAN NALA ARKA -Laabsalaax Tuugnimo lagu qabtay
iftineducation.com – Inkastoo dad badani ka yaabeen Xasan Dhuxul inuu yahay nin xaday heesaha uu sheegto lahaanshahooda oo todobaadkii tegay seddex ka mida bulshadda loo baahiyay iyagoo dadkii lahaay qaadayaan hadana fadeexadii ugu weyneed ayaa soo wajahday kadib markii la ogaaday inuu neenaasta LaabSaalax xitaa ka xaday wiil reer Gabiley ah oo ku nool Cape Town South Africa kaas oo la…
Muuqaalkaan Qof kasta oo qurbaha joogto ayuu Anafacayaa-Nala daawo
iftineducation.com – Gabadh somali british oo lagu magacaabo Hinda love ayaa soo saaraty baraha bulshada muuqaal soomaalida qurbaha Aad u anfacaya gaar Ahaan gabdhaha jecel is qurxinta iyo labiska nuuca ay Ragu soomaalida ay ujecelyihiin soona jiita indhaha Raga. GUJI HALKAAN EE DAAWO
Cumar Faaruuq Oo ‘Lagu Weeraray Xamar’
iftineducation.com – Xoghayihii hore ee ururka Suxifiyiinta qaranka ee NUSOJ Cumar Faaruuq Cusmaan ayaa la sheegayaa in lagu weeray meel aan ka fogayn guri uu deganaa oo ku yaalla degmada Hodon, gaar ahaan Carwadii Qaranka maanta. Cumar Faaruuq oo weerarka kadib la hadlay VOA-da ayaa sheegay in koox wadatay gaari yar ay soo weerareen, isaga oo magaalada ka yimid oo galaya…
Farsamooyin Ku Sahlaya Inaad Biyaha Wax Badan Hayso Si Aad Galmada Waqti Dheer U Wado
iftineducation.com – Waxaan halkaan uga hadlaynaa sidee la isaga daaweeyo biyo baxa deg deg ah. -Waxa jira taba bar nafsaani oo aad isaga daaweyn karto biyo baxa deg deg ah, waxaana lagu magacaabaa Kegel Excercise. tababarkaan waxaa lagu dheeraayaa mudada biyo baxa iyadoo la isku dayo in la joojiyo dibne loo bilaabo galmada dhawr jeer Kegel Excercise ayaa lagu xoojiyaa murqaha…
Egypt, Ethiopia & Sudan oo ku heshiiyey dhameystirka daraasada Biyo-Xireenka Nile
iftineducation.com – Kulankii ka socday Khartuum ee u dhaxeeyey Wasiirada Arrimaha Dibada ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Sudan ayaa laga soo saaray heshiis horleh oo la xariira Biyo-Xireenka Itoobiya dhiseyso. Khilaaf xoogan ayaa soo dhexgalay sadexdan wadan oo isku afgaran waayey qeybsiga biyaha wabiga Nile, kadib markii Masar iyo Sudan ay sheegeen in hawsha ay Itoobiya wado ay hoos u dhigi…